Olee otú Wepụ iTunes Ndabere maka Your iDevice / Android / Nokia ekwentị
Gịnị mere i kwesịrị iji wepụ iTunes ndabere?
E nwere nanị ụfọdụ oge na ị chọrọ wepụ iTunes ndabere faịlụ iji weghachi gị chọrọ ọdịnaya gị iPhone, iPod, iPad, Android na Nokia ekwentị.
* Echefuola gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka.
* Mmadụ na mberede ehichapụ data gị iDevice.
* Mgbe jailbreak, data na gị iPhone, iPod aka na iPad na-arahụ.
* Dị ịgbanwee gị ochie iPhone na Android ma ọ bụ Nokia Phone, ma na-achọ na-ochie data.
* E na ụfọdụ ndị ọzọ mere na-edu gị adịrị iTunes ndabere.
Olee otú Wepụ iTunes ndabere File
Otú ọ dị, iTunes ndabere faịlụ na-agaghị ekwe iji nweta ma ọ preview, ka naanị wepụ. Nke ahụ bụ ikwu, ị nwere ike kpọmkwem iri ọ bụla data nke iTunes ndabere faịlụ. Ị nwere iji weghachi niile data na ya na ekwentị gị, n'agbanyeghị ma ị chọrọ n'ezie ha ma ọ bụ.
Ugbu a, ihe a gbanwere. Ebe a bụ ọkachamara iTunes ndabere extractor, nke na-enyere wepụ kọntaktị na ndị ọzọ na ekwentị gị, n'agbanyeghị na ọ na-agba ọsọ iOS, Android ma ọ bụ Symbian (Nokia).
Mfe wepụ data site ndabere faịlụ kere site iTunes, blackberry na ndị ọzọ na nyefe data n'etiti ekwentị abụọ.
Wepụ iTunes ndabere faịlụ na transfer gị iDevice / Android / Nokia ekwentị.
Weghachite Blackberry ndabere faịlụ ma weghachi gị iPhone na Android ekwentị.
Nyefee na kọntaktị, foto, SMS, music na ndị ọzọ n'etiti iDevice, Android na Nokia igwe.
Na-akwado isi na-ebu - AT & T, Sprint, Verizon na T-Mobile.
Arụ ọrụ nke ọma na iPhone, Samsung, HTC, iPad, iPod aka, Nokia (Symbian) ekwentị na ndị ọzọ.
Easy Nzọụkwụ iji weghachite iTunes ndabere File
Nzọụkwụ 1. Wụnye-agba ọsọ ahụ iTunes ndabere Extractors
Nke mbụ niile, ibudata ma wụnye a software na Windows kọmputa. Agba ya iji na-enweta bụ isi window.
Gaa na nkwado ma weghachite mode na pịa Weghachi. Na ndọpụta ndepụta, họrọ si iTunes ndabere faịlụ ịbanye Iweghachi window.
Sep 2. Jikọọ ekwentị gị na / Tablet na kọmputa
Wepụ eriri USB na jikọọ ekwentị gị / mbadamba na kọmputa. Ọ pụrụ ịbụ ihe iPhone, iPod aka, iPad, Android ekwentị na a Nokia ekwentị. Mgbe ọ na-ahụrụ, ị ga-ahụ ya na window.
Sep 3. Malite wepụ Data si iTunes ndabere File
Ugbu a, ihe niile iTunes ndabere faịlụ na-egosi na ekpe. Tinye akà rà gị chọrọ otu. Mgbe ahụ, họrọ data ị chọrọ wepụ si iTunes ndabere faịlụ. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ wepụ foto site na iTunes ndabere, unu ga-edebe Photos enyocha. Mgbe ahụ, pịa Weghachi.
The data i nwere ike wepụ dị iche iche dabeere na dị iche iche na-aga igwe.
* N'ihi Android ekwentị gị, ike wepụ kọntaktị, foto, video, SMS na-akpọ ndekọ.
* N'ihi iPhone, ị nwere ike wepụ kọntaktị, ozi ederede, foto na video.
* N'ihi na iPad na iPod aka, i nwere ike wepụ kọntaktị, foto na video.
* N'ihi Nokia (Symbian) ekwentị gị, ike wepụ kọntaktị.
E wezụga Wondershare MobileTrans, e nwere ihe ọzọ iTunes ndabere extractor - na Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery), nke nwere ike na-akpaghị aka na-ahụ gị iTunes ndabere faịlụ ma wepụ ha n'ime dị iche iche ige, gụnyere igwefoto mpịakọta, foto iyi, kọntaktị, ozi, ndetu, oku akụkọ ihe mere, olu memo, wdg Ma i nwere ike ịhụchalụ na-agbake ha niile na otu Pịa.
Download free ikpe mbipute a software n'okpuru na wụnye ya na kọmputa gị.
Olee otú Wepụ Blackberry ekwentị ndabere File na Nyefee na iPhone?
Wepụ Blackberry ekwentị ndabere File na Nyefee na Android ekwentị?
Otú nyefee Android ọdịnaya ekwentị na-iPhone?
Olee otú Detuo Data si iPhone ka iPhone?
Olee otú Gbanwee si gam akporo ka iPhone?
iPhone VS Android: Gịnị bụ Esemokwu?
Gịnị bụ 17 Best Free ngwa ọdịnala na iPhone?
Otú nyefee faịlụ site Motorola ka iPhone?
Olee otú ịchọta ma na-ele iTunes ndabere faịlụ
Olee otú Naghachi Voice Memos si iPhone / iPad / iPod aka
Nyefee Non zụrụ na zụrụ faịlụ site iPod ka iTunes
Nyefee Music si gam akporo ka iTunes Mfe
Top 5 iTunes ndabere Managers
Otú nyefee foto site na iPhone ka iTunes
Otú nyefee iTunes ka Android
Best iTunes Ọhazi
Olee otú iji weghachi Ndi ana-akpo Naanị site na iTunes ndabere
Olee otú Họrọ si iTunes Radio na Pandora
Otú nyefee Podcast si iPhone ka iTunes
> Resource> iTunes> Olee wepụ iTunes Ndabere maka Your iDevice / Android / Nokia ekwentị